Toro-hevitra avy amin'Andriamanitra ho an'ny Ray aman-dreny
Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalala Ilay hatramin’ny voalohany hianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery hianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin’ Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy hianareo. 1 Jao. 2:14
Mety ho takatry ny sain'ny ray aman-dreny, fa. mizotra araka ny fitarihan' Andriamanitra izy ireo eo amin'ny fitaizany ny zanany, dia handray fanampiana avy any ambony izy ireo.Tombontsoa lehibe lavitra no raisin'izy ireo; satria raha mampianatra izy ireo dia mianatra. Hahita fandresena ny zanak'izy ireo, amin'ny alalan'ny fahalalana izay efa noraisiny tamin'ny fankatoavana ny lalan'ny Tompo. Hanana hery handresena ireo fironana voajanahary sy nolovaina ho amin'ny ratsy izy ireo. Ho voasokajy manokana ho afaka hanampy ireo tanora ivelan'ny tokantrano ny ray sy reny maro, amin'ny fiinehoan'izy ireo ny ohatry ny fahalemem-panahy sy ny faharetana, amin'ny famolavolan'izy ireo ny toetran-janany hifanaraka amin'ilay Môdely avy any an-danitra. Ry ray aman-dreny, adidinareo ny mamboly ao amin'ny zanakareo ny toetra feno faharetana, toetra matotra tsy miovaova ary ny fitiavana marina sy madio. Amin'ny fikarakarana araka ny tokony ho izy ny zanaka izay omen'Andriamanitra anareo, dia hanampy azy ireo hametraka ny fototra madion'ny toetra voalanjalanja tsara ianareo. lanareo no mampitoetra lalina ao an-tsainy ireo fitsipika maro, izay harahiny ihany koa any an-tokantranony manokana indray andro any. Ny vokatry ny ezaky ny fitarihana tsara ataonareo dia ho hita eo amin'ny fitondran'izy ireo ny ankohonany araka ny sitrapon'ny Tompo. Tahina ny tokantrano izay misy ray sy reny manolo-tena tanteraka ho an'Andriamanitra mba hanao ny sitrapony ! Ny tokantrano iray voarindra tsara, voafehy araka ny tokony ho izy, dia manambara lavitra kokoa ny toetra maha-Kristianina,mihoatra noho ireo toriteny izay, azo torina. Ny fianakaviana toy izany dia porofo maneho fa mahita fahombiazana eo amin’ny fanarahana ny fitarihan’Andriamanitra ny ray aman-dreny, ary ny zanaka koa dia hanompo Azy ao am-piangonana. Mitombo ny hery miasa mangina avy amin'izy ireo; satria raha mizara izy ireo, dia mandray mba hizara indray. Mahita mpanampy.ny ray sy ny reny, eo amin'ny zanany izay mizara amin'ny hafa ny torohevitra tsara noraisiny tao an-tokantrano. Mandray fanampiana ihany koa, araka izany, ny mpifanolo-bodirindrina aminy, satria amin'ny alalan.'izany, dia manjary mitombo ho amin'ny fanavaozana ho an'ny ankehitriny sy ho mandrakizay izy ireo. Mirotsaka amin'ny fanompoana ny Tompo avokoa ny fianakaviana manontolo; ary avy arnin’ny ohatry ny toe-panahy araka an'Andriamanitra asehon’izy ireo, dia ho voasarika ho tonga mahatoky sy marina eo anatrehan' Andriamanitra koa ny hafa, eo amin'ny fikarakarana ny ondriny, dia ny ondriny mahafinaritra.